အိပ်မက်ဆုံရာ ဗိုလ်လုပွဲ မေ ၅ ရက်နေ့ မျှော်စင်ကျွန်းတွင် ကျင်းပမည် | ဧရာဝတီ
အိပ်မက်ဆုံရာ ဗိုလ်လုပွဲ မေ ၅ ရက်နေ့ မျှော်စင်ကျွန်းတွင် ကျင်းပမည်
နဒီထိုက်| May 3, 2013 | Hits:6,456
18 | | အိမ်မက်ဆုံရာ Season5ပြိုင်ပွဲဝင်များနှင့်ဒိုင်များ (ဓာတ်ပုံ – အိပ်မက်ဆုံရာ Fun page facebook မှ)
Channel7မှာ လွှင့်နေတဲ့ အိပ်မက်ဆုံရာ Season5နောက်ဆုံး ဗိုလ်လုပွဲကို မေ ၅ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းမှာ မျှော်စင်ကျွန်းမှာ ကျင်းပတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံကျော် တေးသံရှင် ဇော်ပိုင်၊ ဖြိုးကြီး၊ ဟဲလေး၊ ဇမ်နူး၊ နေနေ တို့ကလည်း ပြိုင်ပွဲဝင်တွေနဲ့ အတူ သီချင်းတပုဒ်စီ တွဲဆိုကြမယ်လို့ သိရပါတယ်။
ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကလည်း သီးသန့် သီချင်းတပုဒ်စီနဲ့ ပြိုင်ကြမှာ ဖြစ်ပြီး အဲဒီ သီးသန့် တယောက်ချင်း ဆိုတဲ့သီချင်းနဲ့ပဲ အမှတ် ပေးမှာဖြစ်တယ်။ ထုံးစံအတိုင်း The Ugly တေးဂီတက တီးခတ်ပေးမယ်၊ ဒိုင်လူကြီးအဖြစ် တေးရေးမြင့်မိုးအောင်၊ တေးသံရှင် စည်သူလွင်နဲ့၊ ရေဗက္ကာဝင်းအစား အယ်လ်ခွန်းရီက တာဝန်ယူပေးမယ်လို့ စည်သူလွင်ဆီက သိရပါတယ်။
‘အိပ်မက်ဆုံရာ’ အစီအစဉ်ကို Season 1 မှာ ကတည်းက ပရိသတ် တော်တော်များများ စိတ်ဝင်စား ခဲ့ကြတာပါ။ နော က်ပိုင်းတော့ အိပ်မက်ဆုံရာဟာ အဆိုပြိုင်ပွဲမှ မဟုတ်တာ၊ ပါဖောမန့် ပြိုင်နေတာပဲ ဆိုတဲ့ ဝေဖန်သံတွေ ထွက်လာခဲ့တယ်။
အိပ်မက်ဆုံရာဟာ အဆိုပြိုင်ပွဲ ဖြစ်တယ်၊ ပါဖောမန့် ပွဲမဟုတ်ပါဘူးလို့ အိပ်မက်ဆုံရာ ဒိုင်လူကြီး တေးသံရှင် စည်သူလွင်က ပြောပါတယ်။
“အပြင်က ပရိသတ်တွေရော၊ ဝါသနာရှင် ကလေးတွေရော ပြောချင်တာက အိပ်မက်ဆုံရာဆိုရင် ပါဖောမန့်ကို ဦးစားပေးတဲ့ အစီအစဉ်လို့ ထင်ကြမြင်ကြတယ်။ အမှန်တော့ မဟုတ်ပါဘူး၊ ပါဖောမန့် ဆိုတာက ကြည့်သူတွေ မျက်စိပသာဒ ဖြစ်ဖို့ အတွက်ပါ၊ Channel7ဆိုတာကလည်း ဖျော်ဖြေရေး ချယ်နယ် တခုဖြစ်တယ် သီချင်းဆို ပြိုင်ပွဲတခုရဲ့ အသွင်ကိုလည်း ဆောင်မယ်၊ ပရိသတ်အတွက် ဖျော်ဖြေရေးလည်း ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ သဘောနဲ့ အိပ်မက်ဆုံရာ အစီအစဉ်ကို တင်ဆက်ခဲ့ ကြတယ်။ ကျနော်တို့ ဒိုင်တွေအနေနဲ့ ဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့ အခါကျတော့ အဆိုပညာကိုပဲ အဓိက ဦးစားပေးတယ် ဆိုတဲ့
အကြောင်း အားလုံးကို သိစေချင်ပါတယ်။ အဆိုတော်တဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်တွေရဲ့ သူမသာကိုယ်မသာ အမှတ်တွေထဲက ဆုံးဖြတ် ရွေးချယ်ချင်ပါတယ်။ တကယ် အဆိုကောင်းတဲ့သူတွေ လာစေချင်ပါတယ်” လို့ စည်သူလွင်က ရှင်းပြပါတယ်။
အိမ်မက်ဆုံရာရဲ့ နည်းပြဆရာ တဦးအဖြစ် အားလုံးသိပြီးသား ဖြစ်တဲ့ ခိုင်မြဲသာကတော့ အိမ်မက်ဆုံရာလို့ စာတမ်း ထိုးတယ်၊ အဆိုပြိုင်ပွဲလို့စာတမ်း မထိုးထားဘူး၊ ရုပ်ရှင်လည်းမဟုတ်၊ Reality ရှိုးလည်း မဟုတ်တဲ့ တီဗီရှိုး ဆိုတာမျိုး တခုရှိတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း ဧရာဝတီကို ပြောပါတယ်။
“ကျနော်က ဂီတဘက်က လူဆိုတော့ ဂီတနဲ့ပဲ နားလည်တယ်၊ သို့သော် ရုပ်ရှင် ရှုထောင့်က ကြည့်မယ်ဆိုရင် နားလည်တဲ့ သူတွေက တီဗီရှိုးဆိုတာကို နားလည်တယ်။ ပါဖောမန့်ကိုလည်း ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း ဦးစားပေးတယ်၊ အသံကိုလည်း ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း ဦးစားပေးတယ်။ ဥပမာ ကိုရီးယားရုပ်ရှင်တွေကို မြန်မာပရိသတ်တွေ ဘာကြောင့် စွဲလန်းနေလဲ သူတို့ နားလည်တယ်။ အဲဒီလိုပဲ ဒီကလေးတွေ အပေါ်မှာ မြန်မာပရိသတ်တွေ ဘယ်လို စွဲလန်းအောင် လုပ်မလဲဆိုတာ ဒီအစီအစဉ် လုပ်သူတွေက နားလည်တယ်” လို့ သူက ဆိုတယ်။
ဆက်လက်ပြီး ခိုင်မြဲသာက အပြင်မှာ အိမ်မက်ဆုံရာကို ပါဖောမန့် ဦးစားပေးတယ်လို့ ထင်မြင်ချက်ပေးကြတာဟာ မမှားဘူး၊ ဒါပေမယ့် ထင်မြင်ချက်ရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ပြီးပြည့်စုံမှု တခုတော့ သိစေချင်တယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း၊ အဆို ပြိုင်ပွဲဆိုတာ အသံပဲ ကောင်းရမယ် ဆိုတာ လက်ခံတယ်၊ ဒါဟာ အဆိုပြိုင်ပွဲလို့ နာမည်မတပ်ဘူး၊ တီဗီရှိုးလို့ပဲ နားလည်ပေး စေချင်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
အိမ်မက်ဆုံရာ Season5မှာ နောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲဝင် ၁၀ ဦးဖြစ်တဲ့ ဗို၊ ထင်တိုင်း၊ စောနေလင်းဟန်၊ စနိုး၊ စိုင်းရဲလင်း၊ ရွှေပု၊ ဇန်ဝေယံထူး၊ အောင်မြင့်မြတ်၊ ပိုးအိအိခန့်၊ ကြူကြူ တို့က မျှော်စင်ကျွန်းမှာ ပြိုင်ကြရမှာ ဖြစ်ပြီး ပြိုင်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်လို့ အင်တာဗျူးခွင့် ကိုတော့ MRTV4 က မပေးတဲ့အကြောင်း ဖုန်းနံပါတ်လည်း ပေးခွင့်မရှိတဲ့ အကြောင်း၊ တခါက အင်တာဗျူး တခုမှာ အမှားဖြေမိတဲ့ အတွက် အိမ်မက်ဆုံရာ ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကို ဌာနက ဖြေခွင့် မပေးသေးတာ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း ခိုင်မြဲသာက ရှင်းပြပြီး သူ့ဆီမှာလည်း ဖုန်းနံပါတ်တွေ မရှိဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
မေ ၅ ညနေ ပြုလုပ်မယ့်ပွဲကို ကြည့်ချင်သူတွေက အိမ်မှာရှိတဲ့ MRTV Receiver ကတ်ထဲက နံပါတ်ကိုပြောပြီး လက်မှတ် ၂ စောင် ထုတ်ယူနိုင်ကြောင်း၊ အဲဒီ Receiver တခုက ကျပ် ၄၅၀၀၀ တန်ကြေးရှိကြောင်း၊ MRTV4တီဗီဂိုက် ဌာနက သိရပါတယ်။
အိမ်မက်ဆုံရာ Season6အတွက် ဧပြီ ၃ ရက်နေ့က လျှောက်လွှာစတင် ရောင်းခဲ့ကြောင်း၊ လျှောက်ထားသူ ၁၀၀၀ ထဲကမှ မေ ၂ ရက်နေ့မှာ နောက်ဆုံး လူရွေးပွဲကျင်းပပြီး လူတရာလောက် ရွေးမှာ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း၊ Season တခုနဲ့တခု လူရွေးပုံ ပေါ်လစီ မတူကြောင်း ခိုင်မြဲသာက ပြောပါတယ်။
လျှောက်လွာတစောင်ကို ၃၀၀၀ ကျပ်နဲ့ ရောင်းရာမှာ တရက်တည်းနဲ့ အစောင် တထောင်ကျော် ကုန်သွားတယ်လို့ MRTV4ကနေ သိရပါတယ်။
ပါဖောမန့် အဆိုတော်၊ အာခေါင်ခြစ်အော်တဲ့ အဆိုတော်တို့ရဲ့ သင်္ကြန်လား
အောင်ကိုလတ်ရဲ့ “ကယန်းအလှ” ရွှေကြက်ဖရုပ်ရှင်ပွဲတော် ဝင်ပြိုင်မည်
နက္ခတ်မှားတဲ့ တိုက်ပွဲမှာ နေတိုး သုံးကိုယ်ခွဲ သရုပ်ဆောင်မယ်
နွမ်းပါးတဲ့ ကျောင်းသား လူငယ်တွေအတွက် ရန်ပုံငွေဖျော်ဖြေပွဲ ကျင်းပမယ်
One Response	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website James May 4, 2013 - 10:35 am	Wish to be there and see how they will perform on that day. And wish you all the best to the competitors.